Manchester City oo guul soo laabasho ah ka soo gaartay Real Madrid kulanka lugta hore wareega 16-ka ee tartanka UCL… + SAWIRRO - Hargeele - Wararka Somali State
(Madrid) 27 Feb 2020. Manchester City ayaa guul soo laabasho ah ka soo gaartay Real Madrid kulanka lugta hore wareega 16-ka ee tartanka UEFA Champions League, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 1-2.
Daqiiqadii 60-aad kooxda Real Madrid ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta, waxaana 1-0 ka dhigay Isco, waxaana goolkan ka caawiyay xiddiga reer Brazil ee Vinicius Junior.
Laakiin daqiiqadii 78-aad kooxda Manchester City ayaa heshay goolka bar-bardhaca waxaana 1-1 ka dhigay xiddiga reer Brazil ee Gabriel Jesus, waxaana goolkan ka caawiyay Kevin De Bruyne.
Daqiiqadii 83-aad kooxda Manchester City ayaa heshay gool ku laad, waxaana gool u badelay Kevin De Bruyne, ciyaarta ayaana sidaas ku noqotay 1-2 ay ku hoggaamineysay Skay Blues.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxay ku soo dhamaatay 1-2 ay ku adkaatay Manchester City oo marti ugu aheyd Real Madrid garoonka Santiago Bernabeu.
Miyaa laga ogolaaday Kooxda Tottenham racfaankii ay ka qaateen kaarkii casaanka ahaa ee Son uu qaatay kulankii Chelsea?
Van Gaal oo sharaxaad ka bixiyay sababtya Frenkie de Jong uu wali ula qabsan la’ayahay kooxda Barcelona